७१ हजार पुगेको सुनको मुल्य एक्कासी घट्यो, कति पुग्यो तोलामा ? थाहा पाउनुहोस् – Fewa Times
७१ हजार पुगेको सुनको मुल्य एक्कासी घट्यो, कति पुग्यो तोलामा ? थाहा पाउनुहोस्
प्रकाशित मिति: August 14, 2019 4:43 pm
काठमाडौँ – पछिल्लो केहिदिन अघि बढीरहेको सुनको भाउमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।
सुनको भाउ बुधबार तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला रु सात सय घटेर ७० हजार ३ सयमा झरेको छ । मंगलबार एकैदिन तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढेर सुन तोलाको ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो ।